अमेरिकामा ‘पोर्न स्टार’ माया को हुन् ? सर्वाधिक १० धनी पोर्न स्टार हेर्नुस «
अमेरिकामा ‘पोर्न स्टार’ माया को हुन् ? सर्वाधिक १० धनी पोर्न स्टार हेर्नुस
प्रकाशित मिति : 27 June, 2019 11:13 am
तिम्रो नाम के हो ? ‘म माया बेजिन । ’तिम्रो घर कहाँ छ ? ‘म नेपालबाट आएकी हुँ ।’…नेपाल कहाँ छ ?‘…चीनको छेउ, इन्डियाको नजिकै…। मलाई तिमीहरू इन्डियन ओरिजिन पनि भन्न सक्छौ।। ’तिमीलाई किन पोर्न स्टार हुन मन लागेको ? मलाई ओरल सेक्स मन पर्छ, त्यसैले।।’
यो अंग्रेजी भाषामा लिइएको एउटा मौखिक अन्तवार्ताको अनुवादित अंश हो । आफूलाई नेपाली बताउने एउटी भर्खरकी युवती अमेरिकामा पोर्न स्टार हुने दौडमा छिन् र उनले केही स्तरीय टि्रपल एक्स चलचित्रमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् ।
ओस्कार’ एवार्ड जस्तै हरेक वर्षको जनवरीमा ब्लु फिल्म र पोर्न स्टारहरूको एभिएन एवार्डको भव्य आयोजना हुने गरेको छ । उक्त एवार्डमा आफूलाई खुलेआम ब्लु फिल्मको स्टार भनेर चिनाउनेहरू निकै हुन्छन् र ती हलिउड वा बलिउडका नायक-नायिकाकै हाराहारीमा चर्चामा पनि आउँछन् ।
माया अर्थात् दीपशिखा त्यही दौडमा सामेल छिन् । कुनै स्वच्छन्द युवती यो दौडमा सामेल हुनु नौलो कुरा होइन, अचम्मको कुरा के हो भने उनले आफ्नो परिचय नेपाली भनेर दिएकी छिन् र उनको प्रोफाइल साइटमा पनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरिएको छ । पोर्न स्टार बन्न चाहनेहरूलाई अवसर दिने एउटा पोर्न साइट दचयतजभचयिखभ।अॐ ले मायाको १६ मिनेटको अन्तवार्ता -अडिसन)को भिडियो अपलोड गरेको धेरै भैसकेको छ ।
मायाको पहिलो यौन भिडियोमा उनी एउटा घरमा अधबंैसे पुरुषसँग प्रवेश गर्दा भित्र ढुकेर बसेको मानिसले हतियार देखाएर ती अधबैंसेलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ, अनि मायासँग यौन क्रियाकलाप गर्न थाल्छ, जसमा पछि गएर ती अधबैंसेले पनि साथ दिन्छन् । मायाले ती दुवै पुरुषसँग प्राकृतिक-अप्राकृतिक यौनक्रीडा गर्छिन् । उनको पहिलो यौन चलचित्र निकै स्तरीय प्रविधिमा निर्माण भएको छ । उक्त भिडियो डाउनलोड गर्न cpDeatingcuckolds.cç /guest/gllaeries/ Daya_ bazin मार्फत ३० देखि १ सय अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने हुन्छ, यद्यपि भिडियोको ट्रेलर भने सित्तैंमा हेर्न पाइन्छ । मायाको पूरै अन्तवार्ता सुन्न बेव बारमा www.brotherlove. cç/video-archiveDaya-bazinटाइप गर्नुपर्छ ।
आफूलाई नेपाली बताउने अमेरिकी यौन चलचित्रकी स्टार माया बेजिनको वास्तविक नाम दीपशिखा नै हो । उनको एउटा अर्को अडिसनको भिडियो पोर्न साइट दबलनदचयक।अॐ पनि फेला परेको छ । सेतो स्लिभलेस र जिन्स लगाएकी माया अर्थात् दीपशिखाको अडिसन कुनै रेकर्डिङ स्टुडियोजस्तै देखिने कोठामा लिइएको छ । भिडियोको सुरुवातमै माया भनिएकी उनले आफ्नो नाम दीपशिखा भएको र त्यो नाम नेपाली भएको बताएकी छिन् ।
भिडियोमा स्वर मात्र सुनिने अडिसन लिने व्यक्ति एक पोर्न स्टार भएको उनीहरूबीचको वार्तालापका क्रममा स्पष्ट हुन्छ । दिनको कम्तीमा दुई युवतीसाग यौनसम्पर्क राख्ने आफ्नो दिनचर्याका ’बोउत्मा ती व्यक्तिले हालसम्म ४ हजारजति युवतीसाग सम्पर्क राखेको बताउँदा दीपशिखा चकित परेकी छिन् । दीपशिखाले आफू हाल प्लस टु पढिरहेको र मोजमस्ती गर्न भन्दा पनि ग्य्राजुएसन गर्ने उद्देश्यले स्कुल जाने गरेको बताएकी छिन् । १४ वर्षको उमेरमा २१ वर्षका युवकसाग पहिलो पटक यौनसम्पर्क गरेको र ती युवकसाग लगातार दुई वर्ष सम्पर्क गरेको उनले बताइन् ।
उनले आफूलाई केटाहरूले ँयुज एन्ड थ्रो’ गरेका कारण केटासाग भन्दा केटीहरूसाग सम्बन्ध गाँसेको पनि बताएकी छिन् । दीपशिखाले आफू महिला समलिंगी भएको र ३० जना केटी साथीसाग सम्बन्ध राखेको बताएकी छिन् । एउटा केटासाग आफ्नो ँइन्गेज्मेन्ट’ पनि भैसकेको र ऊसागको यौनसम्बन्ध राम्रै भए पनि चित्तबुझ्दो नभएकाले सम्बन्ध राम्रो नभएको उनले उक्त अडिसन भिडियोमा भनेकी छिन् । निकै उत्तेजक ढंगबाट लिइएको उक्त अडिसनलाई दीपशिखाले आफ्नो दोस्रो अडिसन भनेकी छिन् ।
अडिसनको अन्त्यमा ती पोर्न स्टारले दीपशिखासाग यौन सम्पर्क गरेका छन्, जसको भिडियो तथा ट्रेलर पनि वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ । अडिसनको ँफुल भर्सन’ हेर्न भने पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनका यौन भिडियोको थि्रडी भर्सन पनि तयार भैसकेका छ । माया अर्थात् दीपशिखाको भिडियो खिच्ने क्यामरा तथा प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ ।
विश्वमै एडल्ट फिल्मको कारोबार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यस उद्योगमा बर्सेनी १५ सय बिलियन डलरको कारोबार हुने गरेको छ । अतः यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आर्थिक हैसियतले पनि आकाश छोएको छ ।
यस्ता फिल्ममा अभिनय गर्ने हिरो/हिरोइनलाई दिल खोलेर पैसा दिइने गरिएको छ । यसैको कारण यिनीहरू धनाढ्यको सूचीमा आउने गरेका छन् । अतः यहा“ विश्वका पा“च सबैभन्दा धनी पोर्नस्टार को हुन् ? उनीहरूसंग कति सम्पत्ति छ ? यसबारे जानौं ।
सर्वाधिक धनी पोर्न स्टार
जेना जेमसन– विश्वका सबैभन्दा धनी पोर्नस्टारमा जेना जेमसनको नाम सूचीकृत छ । पोर्नकी महारानी भनिने जेनाको बर्सेनी कमाइ १६ अर्ब ८० करोड रुपैया“ छ । करिब १ सय ६० भन्दा बढी पोर्न फिल्ममा अभिनय गरेको रेकर्ड बनाएकी जेनाको सफलताको श्रेय भने उनको वेबसाइटलाई दिइन्छ ।
टेरा पैट्रिक– धनी पोर्नस्टारको सूचीमा उनी दोस्रो नम्बरमा छिन् । ८ अर्ब ४० करोड रुपैया“की मालिक टेराले अहिलेसम्म सय फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् । आफ्नो आय बढाउनका लागि उनले टेराविजन नामक एक प्रोडक्सन हाउस समेत स्थापना गरेकी छिन् । यस मार्फत प्रत्येक वर्ष करिब १७ अर्ब रुपैयाको लागतमा औसत १५ फिल्म निर्माण हुने गरेको छ ।
पीटर नर्थ– ७० भन्दा बढी एडल्ट फिल्मको निर्देशन गरिसकेका पीटर नर्थ विश्वका तेस्रो धनी पोर्न स्टार मानिन्छन् । करिब ६ अर्ब रुपैयाँका मालिक पीटरले १८ सय भन्दा वढी फिल्ममा काम गरिसकेका छन् ।
जेसी जेनी– विश्वको चौथो धनी पोर्न स्टारको दर्जा जेसी जेनीले पाएकी छिन् । ४ अर्ब ५० करोड रुपैया“की मालिक यिनले ७५ फिल्ममा काम गरेकी छिन् । यी पोर्न स्टारले केही मेन स्ट्रिम फिल्म र प्ले ब्वाइ टिभी सो नाइट कल्समा पनि काम गरेकी छिन् ।
ट्रेसी लडर्स– विश्वकै पा“चौ धनी पोर्न स्टार हुन ट्रेसी । करिब ४ अर्ब रुपैयाँ कमाइ गरेकी यिनले सय बढी फिल्ममा काम गरेकी छिन् । ट्रेसीले लेखेको पुस्तक ‘ट्रेसी लर्डस ः अन्डरनिथ इल अल’ लाई वेस्ट सेलिङ अथरको उपाधि मिलेको थियो ।
मारिया टाकागी–जापानी मूलकी एसियन पोर्न स्टार हुन् यिनी । मारियाले पोर्न फिल्मबाट २ अर्ब ६ करोड डलर कमाएकी छिन् । उनले २००३ मा ‘बेस्ट कन्भरसेसन’ विधामा जापानी पोर्न अवार्ड जितेकी थिइन् ।
रोन जेरेमी– अमेरिकन पोर्न उद्योगका सर्वाधिक चल्तीका अभिनेता हुने रोन । ९ दशमलव ७५ इन्च लामो लिंगका लागि यिनी विख्यात छन् । उमेरले ५७ वर्षीय रेन जवान छँदा निकै चम्किएका थिए । पोर्न फिल्मबाट उनले १० मिलियन डलर सम्पती कमाएका छन् ।
मुख मात्र स्वास्थ्य राखे पनि अधिकांश रोगबाट बचिन्छ
तपाइँ मुख स्वास्थ्यबारे कत्तिको सजक हुनुहुन्छ । ख्याल गर्नुस् है मानव शरीरभित्र करीब ९० प्रतिशत
यौ’नकर्मीहरुको यो वास्तविक कथा, जहाँ सन्तुष्टिभन्दा बढी पी’डाबोध
काठमाण्डौ-हामीले प्रशारण गरेको ‘नेपाली यौ’नकर्मीको कथा’ सबै यौ’नकर्मीहरुको दैनिकीसँग ठ्याक्कै मेल नखाएपनि अधिकांश यौ’नकर्मीहरुको यो
विवाहपूर्वको प्रेम र यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ?
एजेन्सी-विवाहपूर्व यौन सम्पर्क राखिएको कुरा थाहा पाउन गाह्रो छ। पुरुषलाई महिलाको यौनांगबारे सामान्य जानकारी हुने
मुन्धुमस्टार डटकम – बायोन्टेकको कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनलाई अमेरिकामा प्रयोग गर्ने गरी फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडिए)